Ukulungiswa kwakhona kwe-LNG-Isisombululo seNjineli yeGesi yendalo-Beijing Sinocleansky Technologies Corp.
Ulapha : Ikhaya>amandla>Isisombululo seGesi yendalo
I-CNG Jumbo Cylinder
I-CNG Jumbo Cylinder Cascade
I-CNG Jumbo Tube Skid Container
I-CNG Jumbo Tube Trailer
I-CNG Cylinder Cascade
I-LNG T75 ISO Tanka Container
I-LNG Lorry Tanker
I-TN yeCactact Cryogenic Tank
Isityalo esincinci se-LNG-Isityalo esiphumeleleyo
Isityalo seMini LNG-Uvavanyo lweDynamic P ...
Isingeniso seZityalo seGasooo Mini LNG
SinoCleansky Isikhululo esinyusiweyo esiyiSakhiwo esiqhelekileyo
1. Inkqubo ye-skid ye-LNG yokuhlaziya inkqubo yeqela
2. Inkqubo yokuhlaziya i-LNG skid
3. I-LNG regazification skid ngenkqubo ye-trailer
4. Inkqubo yokuhlaziya isitishi esezantsi ye-LNG
5. Inkqubo ye-sk-refueling yesithuthi se-L-CNG
6.Ukuhlengahlengiswa kwakhona kwe-LNG kunye nokulawulwa kweskid (kubandakanya imitha kunye nevumba elimnandi)
a) Iqela leesilinda ze-LNG: ukuhanjiswa kwe-LNG, ukugcinwa kunye nesisombululo sonikezelo.
b) I-LNG periportal skid: ye-LNG kunye ne-BOG yegesi edibeneyo kwaye ihanjiswe kwi-LNG gasification output pry.
c) I-LNG gasification output skid: ye-LNG gasification, ubushushu obunzima, isilawuli soxinzelelo, i-metering, kunye ne-foul, ukuze i-post-gasification yerhasi yendalo ngokungqinelana neemfuno zomsebenzisi rhoqo, ubushushu obungapheliyo, uxinzelelo rhoqo kwimveliso.
a) Itanki yokugcina ye-LNG skid: yokugcina i-LNG kunye nonikezelo olunamanzi, ngokubanzi ithengwa okanye ibonelelwa ngokuthe ngqo ngumsebenzisi. (Itanki ethe tyaba iza neenkqubo zoxinzelelo, itanki lokugcina ngokuthe nkqo lokucinezela)
b) Ukothula i-PBU skid: yokunyusa kunye noxinzelelo rhoqo xa itanki le-LNG lokothula ulwelo, emva koko iitanki zokugcina i-LNG zinokufikelela kumahluko oqhelekileyo woxinzelelo lolwelo, ke iitanki ze-LNG zinokukunkcenkceshela ukutshaja.
c) Ukukhupha i-LNG gasid skid: i-LNG gasification, ubushushu obuntsonkothileyo, isilawuli soxinzelelo, imitha, kunye ne-foul, ukuze i-post-gasification yerhasi yendalo ngokungqinelana neemfuno zomsebenzisi ukuba zihlale zihlala zihlala zihlala zihlala zihlala khona, zihlala zixinekile kwimveliso . Xa inqanaba lokuhamba flow1000Nm³ / h, kuyacetyiswa ukuba i-vaporizer ye-LNG ixabise ngokwahlukeneyo okanye isiseko ngokwahlukeneyo kwindawo.
a) Iitanki ze-LNG okanye izikhongozeli ze-LNG: zothutho lwe-LNG, isisombululo sokugcinwa kwe-ang.
b) Ukunyanzelwa kunye noxinzelelo rhoqo xa iitanki ze-LNG zisothula ulwelo ukuze xa iitanki ze-LNG okanye izikhongozeli ze-LNG ziphumeze uxinzelelo oluphuma kwimveliso ye-LNG kwi-LNG gasification skid.
c) Ukukhupha i-LNG gasid skid: i-LNG gasification, ubushushu obuntsonkothileyo, isilawuli soxinzelelo, imitha, kunye ne-foul, ukuze i-post-gasification yerhasi yendalo ngokungqinelana neemfuno zomsebenzisi ukuba zihlale zihlala zihlala zihlala zihlala zihlala khona, zihlala zixinekile kwimveliso . Xa inqanaba lokuhamba flow2000Nm³ / h, kuyacetyiswa ukuba i-vaporizer ye-LNG ixabise ngokwahlukeneyo okanye isiseko ngokwahlukeneyo kwindawo.
6. Ukumiselwa kwakhona kwe-LNG kunye ne-skid elawulayo
(kubandakanya umlinganiso kunye nevumba elimnandi)
Uxinzelelo lomsebenzi: 0.2-3.0MPa
Ubungakanani bomphunga omnye: 100-100000Nm³ / H.